Madaxii madaafiicda Al-Shabaab oo mas’uul ka ahaa dilka Askari American ah oo la dilay
Mareykanka oo u aarguday askari looga dilay koonfurta Soomaaliya
MUQDISHO, Soomaaliya – Taliska Militeriga Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay inay dileen hogaamiye sare oo kamid ahaa Al-Shabaab kaasoo mas’uul ka ahaa dilka Askari Ameerikaan iyo dhaawaca afar kale.
Afhayeenka howlgallada AFRICOM Col. Chris Karns ayaa shaaciyay in duqeyn ay Soomaaliya ka fuliyeen diyaaradaha Mareykanka ay ku khaarijiyeen labo xubnood oo Al-Shabaab ah, oo uu ku jiro C/llaahi Jebiyow.
Howlgalkaan ayaa la qaaday 19-kii Bishii April ee aynu kasoo gudubnay.
C/llaahi Jbiyow oo Al-Shabaab u qaabilsanaa qeybta hoobiyeyaasha ayaa isku dabaridaha weerar madaafiic oo lagu qaadey saldhiga ciidamada Marykanka ku leeyihiin Sanguuni, oo 50 KM dhanka waqooyi uga beegan magaaladda Kismaayo 8-dii June, 2018.
Weerarka waxaa ku dhintay Askari katirsanaa ciidamada Mareykanka, kaasoo magaciisa lagu sheegay Alexander Conrad, waxaana ku dhaawacmay hoobiyeyaasha afar Askar oo kale.
Alexander Conrad waxa uu kamid ahaa ciidanka Mareykanka tan iyo 2010, isagoo katirsanaa qeybta sirdoonka militeriga, gaar ahaan howlgalka “Operation Octave Shield” kaasoo lagu beegsado Al-Shabaab iyo Daacish.
Wuxuu noqday Alexander Askarigii labaad oo labo sano gudahooda Mareykanka looga dilay Soomaaliya, iyadoo uu ka horeeyay Askari kale oo lagu dilay degaanka Bariire bishii May ee 2017.
Dowladda Marykanka ayaa ku dhawaad 20 askari uga dhinteen howlgalkii “Black Hawk Down” ee ka dhacay Muqdisho 1993, iyadoo uga dhaawacmeen in ka badan 75 kale.
Mareykanka oo hadda dib ugu soo laabtey howlgalka Soomaaliya mudo dheer kadib ayaa waxaa ka jooga dalka ciidamo boqolaal lagua qiyaaso kuwaasoo fuliyo weeraro gaar ah oo ay ku bartilmaameedsadaan argagixisada.
Waxay ciidamada Mareykanka la howlgalaan kuwa Soomaali ah oo iyagu ay tababarka iyo qalabka siiyeen, sidoo kalena bixiya mushaarkooda, kuwaasoo kala ah Gaashaan iyo Danab.
Ciidamada Mareykanka ayaa fuliyay sanadkaan 33 duqeyn oo cirka ah, kuwaasoo labo kamid ah ka dhacen gobolka Bari ee Puntland, iyadoo midkood lagu dilay ku xigeenkii hogaamiyaha Daacish bishii lasoo dhaafay.
Wasiirka Amniga Puntland Axmed Cabdullaahi Yuusuf (Dowladd), oo ay hareer fadhiyeen..